NISA oo qabatay nin katirsan Al-Shabaab oo rabay in uu weerar bumbo gacmeed ka geysto Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaNISA oo qabatay nin katirsan Al-Shabaab oo rabay in uu weerar bumbo gacmeed ka geysto Muqdisho
NISA oo qabatay nin katirsan Al-Shabaab oo rabay in uu weerar bumbo gacmeed ka geysto Muqdisho
December 4, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Bumabada gacanta ee F1 oo ninka la qabtay uu rabay in uu weerar ku qaado. [Isha Sawirka: NISA]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haayada sirdoonka iyo nabadsugida Soomaaliya ee NISA ayaa qabatay nin katirsan Al-Shabaab oo rabay in uu weerar bumbo gacmeed ka geysto Muqdisho habeenimadii xalay.
Ninka ayaa la qabtay isaga oo aan wax dhibbaato ah geysan, sida NISA ay ku sheegtay bayaan ay ku daabacday boggeeda Twitter-ka.
Bayaanka oo ay soo dhigtay NISA ayaa waxaa la socda sawirka ninka katirsan Al-Shabaab ee ay sheegeen in ay qabteen iyo bumbada gacanta laga tuuro ee loo yaqaan “F1”.
Ninka weerarka qaadi lahaa ee la qabtay. [Isha Sawirka: NISA]
Tilaabadan ayaa imaanaysa iyadoo ammaanka caasimada uu soo hagaagayo bilihii u dambeeyay kadib mowjado weeraro qaraxyo gaari ah oo ay Al-Shabaab ka geysatay halkaas wakhtiyadii dhawaa ee la soo maray.
Duufaan lagu magacaabo Pawan oo la sadaaliyay in ay ku dhufan doonto xeebaha waqooyi ee Soomaaliya
WHO oo sheegtay in isbedelka Cimilada uu khatarta ugu weyn ku yahay caafimaadka dunida qarniga 21-aad
Raysulwasaaraha Soomaaliya oo dhiggiisa Itoobiya kulan kula yeeshay Addis Ababa
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo dhiggiisa Itoobiya Abiy Ahmed ayaa kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee caasimada Itoobiya. Labada masuul ayaa ka wadahadlay xiriirka u dhaxeeya labada dal, sida ay [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa ka soo horjeesatay guddi uu magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo wadahadal la geli doona maamulka Somaliland. War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland fiidkii xalay ayaa lagu sheegay in hanaanka [...]
Warbixin: Maxaa sabab u ah dib u dhaca ku yimid doorashada guddoomiyaha degmada Dangorayo
Garoowe-(Puntland Mirror) Iyadoo ay xilligii golaha deegaanka degmada Dangorayo ee gobolka Nugaal ay ku egayd bishii lasoo dhaafay ee Juun ayaa lagu waday in bilowga bishaan ay dhacdo soo xulida golaha deegaanka degmada iyo doorashada [...]